चीनको ‘नयाँ युग’ सपना
चेतनाथ आचार्य, कार्तिक ६, २०७४
गत बुधबार चीनको राजधानी बेइजिङमा (सीपीसी) को १९औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ । एक साता चल्ने यो महाधिवेशनले मुख्य नेतृत्व परिवर्तन नगरे पनि शक्तिशाली पोलिटब्युरो, स्थायी समितिमा पाँचजना नयाँ अनुहार भित्र्याउँदैछ ।
निर्वाचनमा कस्तालाई जिताउने ?
कुसुमलता सिंह, कार्तिक ६, २०७४
आफूले मत दिएको उम्मेदवारले निर्वाचन हारे पनि न्याय र सन्तोषको अनुभव हुनुलाई सार्थक लोकतान्त्रिक वातावरण मानिन्छ । निष्पक्षतापूर्वक जित्नमात्र होइन, निष्पक्षतापूर्वक पराजित हुनपाउनु पनि लोकतन्त्रले दिनुपर्ने हक हो ।
दल, एलिट र सेन्सरसिप
अभि सुवेदी, कार्तिक ६, २०७४
योराजनीतिक लेख होइन, विषय अलिक फरक छ । तर यो हालका तरंगसँग सोझै जोडिएको हुनाले राजनीतिका केही घटना र छलफलबाटै सुरु गर्छु । असोज १७, २०७४ मा कम्युनिस्टहरूको एकता अभियान घोषित भएपछि चुनावको मुखमा पुगेको नेपालमा केही महत्त्वपूर्ण बहस भए, जुन क्रम अहिले पनि जारी छ ।
आशिष गजुरेल, कार्तिक ३, २०७४
सरकारले जारी गरेको नेपाल पर्यटन रणनीतिले सन् २०२५ सम्म वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
गठबन्धन संस्कारको अभाव
अस्मिता वर्मा, कार्तिक ३, २०७४
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना सत्ता स्वार्थले चलायमान देखिन्छन् । दुई ठूला भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीले अब हुने प्रदेश र संसदीय चुनावमा तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म पुग्ने बाटो तय गरेका छन् ।
खुला अर्थनीति र सरकारी हस्तक्षेप
सोमवहादुर थापा, कार्तिक ३, २०७४
कुनै पनि नीति वा विषय विवादमुक्त हुँदैन । यसका असल र खराब दुुवै पक्ष हुन्छन् । खराब पक्षलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फूलैफूलको चाड तिहार
डा. वासुदेवकृष्ण शास्त्री, कार्तिक ३, २०७४
कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्लद्वितीयासम्मका ५ दिनलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ । यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी ५ दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो ।
डोरनाथ अर्याल, कार्तिक २, २०७४
कृषि क्षेत्रमा बैंक कर्जा
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, कार्तिक २, २०७४
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइजति योगदान कृषि क्षेत्रबाट आउँछ भन्ने दुई तिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको छ । तर यस क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भन्ने केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन ।
बजार, पर्व र पर्यावरणीय मुद्दा
चन्द्रकिशोर, कार्तिक २, २०७४
उज्यालोको खोजीको महापर्व दीपावली मनाइँदैछ । संँगसँंगै यो पनि सवाल उठ्दैछ, कसको दीपावली ? आज कतै अँंध्यारोमाथि प्रकाशको जित होइन, गरिबीको अँंध्यारोको विस्तार र बढ्दो सघनतामाझ एउटा चम्किलो साँझको जितको पर्वको रूपमा मनाउने उपक्रम त भइरहेको छैन ।
संक्रमण कतारको, संकटमा नेपाली
देवेन्द्र भट्टराई, कार्तिक १, २०७४
‘के कतारमा विश्वकप हुने सम्भावना टर्दैछ ?’ शीर्षकमा बीबीसीले रिपोर्ट गरेको र बेलायतको ‘द विक’ लगायतका पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचारले अघिल्लो साता फेरि तरङ्ग ल्यायो ।
प्रगति पथमा लम्किँदै महिला
डा. सुषमा तिवारी (द्विवेदी), कार्तिक १, २०७४
महिला भन्नेबित्तिकै दोस्रो दर्जाको नागरिक अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने समूह भनी राजनीतिमा बुझ्ने गरिएको छ ।
वाईपी आचार्य, कार्तिक १, २०७४
प्राध्यापक नुर्केले गरिबीको दुश्चक्र देखे । जहाँ गरिब गरिब नै रहिरहन्छ, पुस्तौं बिते पनि गरिबी बित्दैन, दुश्चक्रबाट गरिब बाहिर निस्किँदैन भने ।